Ingabe uKristu ngempela uyiNdodana kaNkulunkulu noma Yena Uqobo unguNkulunkulu? | IVANGELI LOKUFIKA KOMBUSO
Okwedlule: Umuntu angawazi kanjani umongo wobunkulunkulu bukaKristu?
Okulandelayo: Yini imvelo yenkinga yokuba umuntu angalazisi iqiniso elichazwe nguKristu? Yini umphumela wokuba umuntu engathathi uKristu njengoNkulunkulu?
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “UJesu wathi kuye, Mina ngiyindlela, iqiniso nokuphila: akekho oza kuBaba, ngaphandle kwami. Uma beningazi...
Izikhombo Zamavesi EBhayibheli: “Ningabakayihlo udeveli, futhi niyokwenza izinkanuko zikayihlo. Wayengumbulali kwasekuqaleni, futhi...